सिडियो कार्यालयमै सेवा 'अस्तब्यस्त’, समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको आरोप - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ९ कार्तिक २०७८, मंगलवार ०९:३५
‘नौ बजेदेखि लाइनमा बसियो । खानापनि खाएको छैन । २ घण्टा लाइन बसेपछि बल्लतल्ल पालो त आयो, तर काम भएन’, छोरीको नागरिकता बनाउन कयपानीबाट आएकी सञ्जिला बन्जरा भन्छिन्, ‘एउटा कागज घरमै छुटेछ । बिहानदेखि लाइन बसेको बेकार भयो । अब फेरि भोलि पनि आउनु पर्ने भयो ।’ जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो कार्यालय मानिने सिडियो कार्यालयमा यत्तिका दुख पाउनु परेकोमा उनले अपसोच गरिन् ।
पहिलोपल्ट सिडियो कार्यालय आउँदा ज्यादै नमिठो अनुभूति भएको मान्बुका सार्की गुरुङको दुखेसो छ । ‘सिडियो कार्यालयमा पहिलोपल्ट आएको हो । यस्तो पो हुँदो रहेछ । छोरी लाइनमा छे । यति लामो लाइन छ कि, पालो कहिले आउने हो पत्तो छैन’, गुरुङ भन्छन्, ‘चिनेजानेको कोही छैन । यसबेला भइसक्यो, कति बजे काम सकिने हो ? अझै यत्तिका मान्छे छन् । आज काम भ्याइने छाँटकाँट छैन । यहाँ कता बस्ने ?’
कर्मचारी अपुग भएका कारण सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको एक सेवाग्राहीको तर्क छ । ‘सेवाग्राहीलाई पनि कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि दशैँ लागेको छ’, एक सेवाग्राही नाम नखुलाउने सर्तमा भन्छन्, ‘दशैँ मनाउन भएभरका सबै मान्छे गाउँमा आएका छन् । यही बेलामा नागरिकता, पासपोर्ट बनाउनु पर्ने छ तर कर्मचारीहरु अझै दशैँ मानेर नफर्केका हुन् कि यत्ति हुन् कुन्नि ?’
जिल्लाका सबैभन्दा ठूला प्रशासक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षकका सामु बञ्जरा र गुरुङ जस्ता दैनिक सयौँले सास्ती खेप्छन् ।
दशैँ र तिहारको बीच बिगत जस्तै यसबर्ष पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा सेवाग्राहीको ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ । नागरिकता र राहदानी फाँटको झ्यालबाट तन्किएको सेवाग्राही लाइन राजस्व तिर्ने फाँटसम्म पुग्ने गरेको छ ।
न कोरोना जोखिमसित डराएर साध्य लाग्छ, न स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर । दिनभरको टण्टलापुर घाममा सेवाग्राहीहरु लाइनमा तँछाडमछाड गर्न बाध्य छन् ।
दशैँ तिहारको छेको पारी गाउँघरमा आएका सेवाग्राहीहरु यही मेसोमा नागरिकता, राहदानी लगायतका कागजपत्र बनाउन यसरी भीड लागेका हुन् ।
आइतबार झण्डै ५ सय जनाले सेवा लिएका छन् । १३६ जनाले नयाँ नागरिकता र ७६ जनाले प्रतिलिपि नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी ८६ जनाले राहदानीको फारम संकलन गरेका छन्, २८ जनालाई राहदानी वितरण गरिएको र ८३ जनाले दु्रत राहदानीका लागि सिफारिस लिएको प्रशासकीय अधिकृत रोकाले जानकारी दिए ।
कार्यालयले सोमबार पनि झण्डै पाँच सयजनालाइ सेवा दिएको छ । ६८ महिला र ७७ पुरुष गरी जम्मा एक सय ४५ जनाको नागरिकता वितरण गरेको छ भने नागरिकता प्रतिलिपि जम्मा ६२ जनाको वितरण गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्य भने दशैतिहारका बेला यत्तिका भीड लाग्नु स्वभाविक ठान्छन् । ‘दशैँ विदाले रोकिएका सेवाग्राहीहरु सबै अहिले आउँदा भीड देखिएको हो । सबै कर्मचारीहरु दत्तचित्त भएर आफ्नो काम गरिरहेकै छन्’, उनी भन्छन्, ‘म आफै पनि बेला बेला फाँटमा गएर कामकाज हेर्ने गरेको छु ।’ साँगुरो ठाउँमा सामाजिक दुरी कायम, मास्कको प्रयोग लगायतका मापदण्ड पूरा गर्न सबै सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।
सेवाग्राहीको समस्या समाधानप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उदासिनता देखाएको एक सेवाग्राहीको आरोप छ । ‘यस्तो बेला कसरी काम गर्ने भन्ने हामीलाई पनि अलिअलि मेसो छ’, लाइनमा भेटिएका उनले भने, ‘कर्मचारी अपुग भए भने कम चाप हुने अन्य कार्यालयबाट केही दिनलाई कर्मचारी झिकाएर काम गराउन सकिन्छ नि ।’ सेवाग्राहीको समस्याको बारेमा प्रशासन कार्यालय गम्भीर नभएको उनको आरोप छ ।